Sunday October 08, 2017 - 08:39:26 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Sida ka muuqata ciwaanka mawduucan waxa aan soo qaatay hees ay wada qaadaanMaxamed Mooge Liibaan iyo Shankaroon Axmed Sagal kana mid ahayd riwaayadii Aqoon iyo Afgarad oo uu midhaheeda iska lahaa Maxamed Warsame Hadraawi, laxankana uu saaray hadaanan qaldanayn Cabdirakiin Jiir, riwaayadaasi oo ay ku jireen Abwaanada kala ah: 1. Hadraawi,2. AHUGaarriye,3. Siciid Saalax Axmed, iyo 4. Muuse Cabdi Oo dhamaantood ka mid ahaa kulliyadii waxbarashada ee lafoole, sida uu hadraawi dhawr jeer sheegay.
Haddaan intaynaan u daadegin midhaha heestaasi aynu eegno taariikh ma guurto ah iyo taarikh cusub oo la kowsatay horumarka iyo heerka ay gaadhay Somaliland oo fure u noqon karta qaran la jaan qaada beesha caalamka oo buuxiya kaalintii looga baahnaa qaran u gudbay duni kale oo la talaabsaday waddamo qarniyo soo jiray, waxaana hubaal ah inaySomaliland u dareerayso 21-Oct-2017ka Ololaha doorashadii Madaxtooyada oo ay u tartamayaan saddex Xisbi qaran oo kala ah Kulmiye, Waddani iyo Ucid. Iyadoo codkii guusha ka raadinaya dadweynaha reer Somaliland maalintaasi waxay si weyn uga duwan tahay 21-October 1969kii oo in qilaab hubaysan oo ciidamadii militeriga Soomaaliya taladii la wareegeen waxaanay ahayd maalin murugo u ah dadweynihii ku noolaa gudaha Soomaaliya iyo dibedba sababtoo ah waxa loo fadhiyey tacsidii madaxweynihii la dilay ee Cabdirashiid Cali Sharmaake oo 13 ilaa 15 1969, wuxuu socdaalo ku galaa bixiyey goboladii la isku odhan jiray waqooyi galbeedSoomaaliya.
Madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake oo horena u ahaa ra'isal wasaarihii dawladii Aadan Cadde wuxuu ahaa qof qiimayn iyo qadarin ku leh dadka aadna looga qadarin jiray gobolada waqooyi, ka dib markii uu dhamaystay safarkii gobolada waqooyi waxa uu 15-October-1969 ka dhoofay ama ka duulay garoonka Hargeysa Airport, waxaanu u jihaystay dhinaca Muqdisho. balse si lama filaan ah ayuu uga degay Madaxweynuhu magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, ilaa imikana intaynu ognahay lama oga qorshe cad oo ay ka lahaayeen isaga iyo qolyihii markaasi u qaabilsanaa mabmaamuuska (protocol) u hayey sababta ay ugu degeen ama ay ka lahaayeen Laascaanood safarkaasi ay ku tageen.